Suuragal Ma Tahay In Xildhibaanada Britain Ay UK Ka Hor Istaagan Inay Ka Baxdo Midowga Yurub? – Xeernews24
Suuragal Ma Tahay In Xildhibaanada Britain Ay UK Ka Hor Istaagan Inay Ka Baxdo Midowga Yurub?
30. August 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Ra’isal wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in UK ay ka baxayso Midowga Yurub marka la gaadho 31-ka Octoobar ee sannadkan.
xitaa haddii ay noqoto in ay midowga Yurub ka baxaan iyadoo aysan wax heshiis ah dhicin.
Waxaa jira xildhibaano fara badan oo ka soo horjeeda inay UK Midowga Yurub ka baxado heshiis la’aan, balse malaga yaabaa inay haatan ka hortagaan arrintaasi iyada oo ay boqoradda dalka Ingriiskuna kala dirtay baarlamaanka?
Muxuu yahay Ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub ee heshiis la’aanta!
Haddii ay Britain ka baxdo heshiis la’aan Midowga Yurub, taasi micneheedu wuxuu yahay inay si durba ah uga baxayaan iyada oo aan la gaadhin wax heshiis ah oo ku saabsan geddi socodka ka bxitaanka. Waxay sidoo kale UK si dhaqsiya uga baxaysaa suuqa barwaaqo sooraanka midka ah ee Yurub.
Siyaasiyiin iyo ganacsato badan ayaa sheegay in haddii ay taasi dhacdo ay dhaawac weyn u geysanayso dhaqaalaha dalka, halka dadka qaar ay sheegayaan in khatarta ka dhalan karta haddii ay Biritain ka baxdo Midowga Yurub heshiis la’aan laga badbadiyay.
Sidee ayay ra’isal wasaaraha ugu suurageli kartaa in UK uu midowga Yurub ka saaro heshiis la’aan?
Marka afka laga sheegayo, ilaa qorsha cusub la isku raaco, Mr Johnson uma baahna in uu qaado tallaabo kasto oo ku saabsan in UK ay kaga baxdo Midowga Yurub iyada oo aysan dhicin wax heshiis ah, sababtoo ah maalinta UK loo asteeyay inay ka baxdo Midowga Yurub ee 31-ka Octoobar ayaa waxaa horay loogu daray sharciga, marka sidaa darteed waxa uu u baahan yahay inuu waqtigaasi suga uun hase yeeshee sidaasi uma sahlana.
Maxay samayn karaan xildhibaanada si aysan UK uga bixin midowga Yurub heshiis la’aan?
Xildhibaanada waxaa u furan laba waddo oo kaliya haddii ay doonayaan in uu qorshohooda hirgalo.
Waddada 1-aad: Inay maamulaan baarlamaanka
Ka dib kulamo gaar gaar ah oo ay yeesheen xildhibaanada ka soo hor jeeda in UK ay ka baxdo Midowga Yurub heshiis la’aan, ayaa waxaa soo baxday in qodobka koobaad uu yahay mid ka caawin karo hadafkooda, marka 3-da September uu baarlamaanka dib ugu soo laabto.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/07/boris-johson.jpg 673 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-30 09:22:092019-08-30 09:22:09Suuragal Ma Tahay In Xildhibaanada Britain Ay UK Ka Hor Istaagan Inay Ka Baxdo Midowga Yurub?
Dufcaddi Koobaad ayaa maanta ka qalin jabisay dugsiga farsamada gacanta ee magaalada... Axmed Madoobe oo warqad codsi ah u diray madaxweyne Farmaajo.